Ogaden News Agency (ONA) – Wararkii ugu dambeeyay een ka helnay xarunta Dhexe ee jabhadda
Wararkii ugu dambeeyay een ka helnay xarunta Dhexe ee jabhadda
Wararka naga soogaadhaya Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya Dagaalo ka dhacay Deegaano kamid ah Dalka Ogadeeniya ee ay Itobiya gumaysato. Dagaaladaas oo ay NH/CWXO ku qaadeen askarta gumaysiga Itobiya ayaa waxaa askarta gumayisga khasaare nafeed oo sidan u kala ah;
Deegaanka lagu magacaabo Duduma-qalan dagaal ka dhacay 11 Sep 2012 ayaa waxaa askarta mooraalka jabsan ee gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 5Askari waxaana lagaga dhaawacay 2ba kale.
19 Sep 2012 Deegaanka lagu magacaabo Biyasoorka dagaal ka dhacay waxaa askarta gumayisga ethiopia loogu gaystay khasaare lixaadle oon faahfaahinta aan dib ka soo sheegi doono.
20 Sep 2012 Halka lagu magacaabo Gorotuurka dagaal ka dhacay waxaa askarta gumaysiga ethiopia ee nafaysan lagaga dilay 2 askari waxaana lagaga dhaawacay 2kale. Isla taariikhdaa Deegaanka lagu magacaabo Balidhuure fal gaadmo ah oo halkaasi kafuliyeen NH/CWXO ayaa waxay ku dileen 1 askari.
Halka lagu magacaabo Karinka-afyare dagaal aad u xooggan oo ku dhex maray NH/CWXO iyo Askarta daalan ee gumaysiga Ethiopia ayaa waxaa askarta gumaysiga wakhtigiisu sii dhamaanaya lagaga dilay 7Askari waxaana lagaga dhaawacay 5 kale.
Sidookela dagaal isna ka dhacay Deegaanka Maromaydhka ayaa waxaa askarta gumaysiga lagu soo gaadhsiiyey khasaar lixaadle oon dib ka heli doono tafaasiil dheeraad ah.